သင်၏လိင်မှုကိစ္စကိုအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်” - သင်၏ Brain On Porn
ခွဲခြားမှုမရှိပါဘူး ဒါဆိုမင်းရဲ့မိသားစုဒါမှမဟုတ်အလုပ်ခွင်မှာတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းဒါကိုဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
Gabe Deem ကအဲဒါကိုမဖွင့်နိုင်ခဲ့ဘူး၊
A ကြည့်ကောင်းသော မိမိအ 20s အတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသူကနေအာရုံစိုက်မှု၏ရေတိုသည်မဟုတ် ဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးမြား။ သူကတစ်ဦး loner မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုအကြောင်းကို nerdish ဘာမျှရှိပါသည်။ သူကတကယ်တော့တစ်ဦး dude တစ်နည်းနည်း, ယုံကြည်မှုနှင့် chatty ပါပဲ။ "ဒါပေမယ့်ငါ့အစစ်တိုက်ပွဲ၌ငါ၏အစတင်ခဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်"ဟုသူကပြောပါတယ်။ "pixels ကိုအဘို့အကြှနျုပျအလိင် drive ကိုမှန်ကန်အမျိုးသမီးတွေ-နဲ့ကျွန်မအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစစ်အမှန်အမျိုးသမီးများကိုဆိုလိုဘို့အကြှနျုပျ၏အ drive ကို outgrow မှစတင်ခဲ့သည်။ အစစ်အမှန်လောကမှာရှိတဲ့အဘယ်အရာကိုမျှပေါ်မှာငါ့ကိုလှည့်နိုင်နဲ့ကျွန်မပဲထွက် freaked ။ "
ယူဆပါသည်သည်သူ၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့သိတယ် ဇီဝကမ္မပြဿနာ; သူကညစ်ညမ်းမရှိပြဿနာကို အသုံးပြု. တစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါဟာသူတို့အဟောင်းတွေ get အဖြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆီးချိုရောဂါဒါမှမဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်, ယောက်ျားလယ်ယာသောပိုပြီးဘုံအကြောင်းတရားများတဦး၏မေးခွန်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကလူငယ်တစ်ဦး, မထိုက်မတန်သောသူဖြစ်၏။ ဒါပေမဲ့, အွန်လိုင်းဖိုရမ်များစူးစမ်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပြဿနာနှင့်အတူယောက်ျားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာဖွေမတွေ့ရှိခြင်း, အများအားဖြင့်ကိုယ့်အဖြစ်အကြောင်းရင်းအဖြစ် befuddled သူတဦးတည်းတုံ့ပြန်မယ့်စိန်ခေါ်မှု ယူ. သူ masturbate နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါတှေ့ မပါဘဲ ညစ်ညမ်း။ porn-သူအသုံးပြုခြင်း၏အနှစ်ပထမရှစ်အသက်ကထိတွေ့နှင့် 12 နေဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ခဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ယင်း၏အရှိဆုံးပုံနှစ်တာကာလအတွင်းကသူ့အာရုံကြောကွန်ယက်ကို reconfigured ခဲ့ရတယ်။
"ငါသည် porn အသုံးပြုမှုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအားဖြင့်, ငါ၏ဦးနှောက်နှင့်၎င်း၏ arousal ယန္တရား rewired င်" အကြာတွင်သည်သူ၏ Re-Boot ကို Nation အမှတ်တံဆိပ်မှတဆင့်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ပိုကောင်းအသိအမြင်များအတွက်အသံစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ယူဆပါသည်, ရှင်းပြသည်။ "ငါ့ကိုငါ့အမိတျဆှမြေားနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူလေးတွေရှိခဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ porn အသုံးပြုမှာအားလုံးမရှက်ခဲ့လေသည်။ ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်ဘဝပဲပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သင်က '' ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇာတိ '' အဖြစ်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ porn အသုံးပြုမှုအလားအလာကိုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တွေ့ရှိခဲ့သောအခြိနျကာလကိုသာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာဘယ်သူမှအကြောင်းပြောနေတာခဲ့ပါတယ်။ "
"ငါသည် porn အသုံးပြုမှုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအားဖြင့်, ငါ၏ဦးနှောက်နှင့်၎င်း၏ arousal ယန္တရား rewired ချင်ပါတယ်," ယူဆပါသည်ရှင်းပြသည်။
သူတို့ဟာနေဆဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာရဲ့တစိတ်တပိုင်း PIED (porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု) သို့မဟုတ် PIDE (ချေါခံရဖို့ရောကျလာပွီဘယျအရာ၏ပုံစံအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-ပုံမှန်အားများအတွက်ပုံမှန် porn အသုံးပြုမှုပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ်သက်ရောက်မှုသို့အချို့သော 40 လေ့လာမှုများရှိခဲ့စဉ်ဖြစ်ပါတယ် porn-သွေးဆောင်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) -there တကယ်ကတကယ်ကဘာလဲဆိုတာရှိပါလျှင်, ထိုအရပ်၌ဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ရှိမရှိ။ အဖြစ်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်အကြားမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲ
သန့်ရှင်း DSMအခြားအရေးကြီးရည်ညွှန်းအချက်များဒါလုပ်နေကြပေမယ့်, Psychiatry ၏မှန်မှန် updated အဖြေရှာတဲ့ Bible, ဥပမာ, ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်ပြုရန်မရှိသေးပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နောက်ဆုံးတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်အခြေအနေကိုတရားဝင်ဖို့ခြေလှမ်းကို ယူ. , ဒါပေမယ့်လောင်းကစားသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူတန်းတူအပေါ်စွဲလမ်းပါဝင်သည်ရှိမရှိအဖြစ်က၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကို၎င်း။ အမှန်စင်စစ်တစ်ခုသာဆရာဂုဏ်ထူးများ၏ကြင်နာဆွဲရန်, compulsion ဆန့်ကျင်အဖြစ်ဤစွဲလမ်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့မှာအားလုံးဘာမှရှိပါတယ်ရှိမရှိမှအဖြစ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိတယ်တန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်အရာခဲအကူအညီလိုသူကိုလူအတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေလိမ့်မည်။
"တကယ်တော့, စိတ်ပညာနှင့် Psychiatry လောကီသားတို့သည်အသာယခုအလေးအနက်ထား porn '' စွဲ '' ယူကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒေါက်တာဂလော်ဒီယာဟားဘတ်, ဗြိတိန်အတွက်အောက်စဖို့ဒဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနတစ်ခုလက်တွေ့စိတ်ပညာရှင်နှင့်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကဖော်ပြသည်။ "ကျနော်တို့ကအလားအလာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးသတိထားမိလာပြီကြောင့်ကားမောင်းထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးမား [porn] စက်မှုလုပ်ငန်းရှိရဲ့ပေးသောအရာ, ထိုပြဿနာများ၏စကေး၏နေဖွယ်ရှိကြီးမားဖြစ်သွားသည်။ ကျနော်တို့ကသင် porn နှင့်အတူစေ့စပ်နေဘယ်လိုဝေးပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းရှာဖွေမတွေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပင်သင်သာ [ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့] အမြင်လျှင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်အဲဒါကိုစိတ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်ကြောင်းယ့်ပုံပဲထိတွေ့ဆက်ဆံကြဘူး။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုလျော့နည်းစေမယ့် space-ထွက် effect ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ သငျသညျခေါင်းကိုက်ခြင်း, နာမငြိမ်, စိုးရိမ်စိတ်များကဲ့သို့ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေရ။ ဒီအလေးနက်ဖြစ်၏။ "
သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားမှ, ယူဆပါသည်သူ၏ YouTube ဗီဒီယိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာရထိုကဲ့သို့သောကိုယ်တော်တိုင်အဖြစ်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုနှင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဆန့်ကျင် butting အနည်းငယ်စိတ်ပညာရှင်, ဖွငျ့ကယျတငျအဓိကပြဿနာကြောင့်အကြီးအကျယ်မဖြေရှင်းနိုင်သေးသွားထုတ်အဲဒီမှာရှိမယ့်သောစိတ်ကူးတွေအကြောင်းနည်းနည်းအငြင်းပွားဖွယ်ရာရှိမယ့်ပြောပါတယ် အမြင်ချင်း။ ကြီးထွားလာပိုပလပ်စတစ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကထက်ပိုပြီးကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်လေးနက်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကနှင့်အညီ, ပြော, စိတ်လှုပ်ရှားစွာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းတွေ့ရှိပေမယ့်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာမယ့်လူလတ်ပိုင်းကဦးနှောက်အပေါ်, ကအများဆုံးမှပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖွင့် acute (ဝေးသီးသန့်အနေဖြင့်သော်လည်း) လူပျိုတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်, သောသူတို့သည် wedded နေရန် devices များမှတဆင့်ယခုတွင်လည်းညစ်ညမ်းစေရန်တူညီသော access ကိုရပါလိမ့်မယ်ကတည်းကကြောင့်နောက်ကျတာထက်ကိုဖြေရှင်းခံရဖို့လိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လှပါတယ်။ ကြီးမားသောမှာလူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဂယက်ရိုက်သင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
"ကျွန်မနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လူအကျယ်မတူညီဖြစ်ကြသည်။ ပိုပြီးလေ့အထီးပြဿနာရဲ့သော်လည်းအမှန်မှာ, မည်သူမဆိုတစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲ-မဆိုအသက်အရွယ်, ယောက်ျား, မိန်းမဖွံ့ဖြိုးနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ; အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာသောသူတို့ကိုအများနှင့်မသောသူတို့ကိုအ။ သူတို့ကအရမ်းပုံပြင်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူ လာ. "နောဧဘုရားကျောင်း၏စာရေးဆရာကပြောပါတယ် Wack: အင်တာနက်က Porn မှစွဲ ယခုညစ်ညမ်း-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သူတို့အဖို့နည်းပြ။ "တချို့သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲမခေါ်ပေမယ့်သေချာပေါက် porn အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတော်မူကြောင်းကိုတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိစေခြင်းငှါအဘယျသို့မရှိကြပါဘူး။ အခြားသူများကိုရှင်းလင်းစွာတစ်ခုစွဲရှိလုပ်ပါ။ သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေမယ့်ပင်ပြီးနောက် porn အရှုံးမပေးဖို့ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ "
ဒါဟာကိစ္စအအေးခဲယဉ်းအသုံးအနှုန်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အခါဤအအံ့အားသင့်ခံရဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသှားရ, "Porn, န့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှ, 24 /7။ သငျသညျနှစ်ကြိမ်နဲ့အတူတူပါပဲကိုကြည့်ဖို့ရှိသည်ဘူး။ porn ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးဒါသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပြီ "ဟုဒေါက်တာရောဘတ် Weiss, နောက်ဆုံး 25 နှစ်ပေါင်းသမာဓိနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်အထူးကုရှာ၏ CEO ဖြစ်သူထွက်ထောက်ပြသည်။ "သင်တစ်ခုခုကိုစူပါလှုံ့ဆော်မှု ယူ. ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်နှင့်ပိုပြီးလူတွေရုန်းကန်သွားကြသည်စေ။ 10 နာရီ porn စောင့်ကြည့်ဖို့စွမ်းရည်ဖြောင့်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဦးနှောက်မှအဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုထက်ပိုသောသုတသေနပွု-အဖြစ်သည်အထိကျနော်တို့လာမယ့်နှစ်ခုကျော်လုပ်နေလုပ်နေနှစ်ပေါင်း-ကျနော်တို့သေးဒီမှာနှငျ့ဆကျဆံနေတဲ့အဘယ်အရာကိုနားမလည်ကြဘူး, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ [porn စွဲလူတွေကို] တစ် Band-Aid ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆေးရုံလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့မသိရပါဘူး။ "
porn အလုပ်လုပ်တယ်-The အမြင်အာရုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွသောလမ်းနှင့်အတူပုံမှန်အားကြွလာသော dopamine hit မှဦးဆောင်အော်ဂဇင်-အဲဒါကို Clinician ကအဖြစ်အတော်လေးတူညီလမ်းအတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲရှိမရှိကျော် quibble လျှင်ပင်, စွဲလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့် မူးယစ်ဆေးပါဘူး။ ကျနော်တို့ Hard-ကြိုး (အနည်းဆုံးမျိုးစိတ်များအတွက်) ရှင်သန်မှု၏ကိစ္စရပ်များအဖြစ်အစားအစာနှင့်လိင်ရဖို့ပါပဲ။ "ထိုအခါအခါသင် content- porn-နဲ့စွဲလမ်းပေးပို့ယန္တရား-အင်တာနက်ကို-သင်များ၏ညှိနှိုင်း amplification ကိုခေါ်မယ့်အဘယျသို့ရကိုနှိုးဆွပေါင်းစပ်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးပိုကြီးတဲ့ "ဟုဒေါက်တာဒါဝိဒ်သည် Greenfield, အင်တာနက်များအတွက်စင်တာတည်ထောင်သူနှင့် Connecticut, US မှာနည်းပညာစွဲ, လက်ထောက်ဆေးပညာတက္ကသိုလ် Connecticut ၏ School မှာ Psychiatry ၏ပါမောက္ခတစ်ဦး large- လုပ်ဆောင်သွားရန်ပထမဦးဆုံးသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးကရှင်းပြသည်ကြောင့်ဖြစ်လာ အဆိုပါ (Pre ကို Wi-Fi ကို) ကအင်တာနက်ရဲ့စွဲလမ်း၏စကေးလေ့လာမှု။
“ တချို့ဆိုရင်မင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အရာမရှိပေမယ့်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာရှိနေတာသေချာတယ်။ အခြားသူများကမူရှင်းရှင်းလင်းလင်းစွဲလမ်းနေပါသည်။ "
"ကလှုံ့ဆော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Porn စွဲလမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကထပ်ပြောသည်။ "ဒါဟာ 20,000-ပေါင်းနှစ်ပေါင်းန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်စာညစ်ညမ်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့အစဉ်အမြဲပုံနှိပ်ထံမှရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများကိုမှ CD တွေ, DVDs နဲ့အင်တာနက်သည်မီဒီယာအသစ်နှင့်အတူချီတက်ပါတယ်။ porn အမြဲတမ်းနည်းပညာအသုံးချဖို့၏အရှေ့ဘက်မှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "
ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်စွဲလမ်းအတွက်အထူးပြုဆေးပညာလယ်ကွင်း porn ရဲ့စွဲအသိအမှတ်ပြုအကြောင်းကိုဒါသတိထားရသနည်း စိတျအပိုငျးမှာတော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းတစ်ဦးအဟောင်းရာတှငျမဝံ့မရဲ၏င်စာရငျးယူလေ၏။ "ဤလောကအတွက်နေရာများစွာ၌, ဥပမာ US မှာ, လိင်သေးညစ်ပတ်ပေရေစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ဖျော်ဖြေရေး၏အခြေခံအဖြစ်, အရာအားလုံးရောင်းဖို့လိင်ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကို၏ကြားမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့ဗစ်တိုးရီးယား, ပြူရီတန်အရှက်ကွဲခြင်းရှိပါသေးရဲ့။ သငျသညျလူထုံအဓိပ္ပာယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦး '' wanker 'ပဌနာသောအခါ, ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. ခံစားရပုံကိုအကြောင်းတစ်ခုခုကပြောပါတယ်။ သငျသညျတစ်ပြိုင်နက်အဲဒီအကြောင်းလိင်, အရှက်ကွဲ၏ဤပေးခြင်းလက်ခံမှုရှိသည်နှင့်တစ်ဦး schism ဖန်တီးပေးပါတယ်။ "
ဒုတိယအ, အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းသော်လည်းယခုတစ်ကြိမ်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေများ-ကြောင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချို့ကြင်နာနေဆဲ compulsive porn ကျော်တစ်ဦးအရိပ်ချပစ် deficit- နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခံစားနေရသူရုံအားနည်းဘုန်းတန်ခိုးကြီးဖြစ်ကြသည်အထိအခိုက်ခံရသောကြောင့်အဟောင်းကိုအမည်းစက် neuro-ဇီဝဖြစ်စဉ်များအဖြစ်ပိုပြီးလက်ခံများမှာ အသုံးပြုသူများသည်။ နေဆဲက condoning အဖြစ်အချို့သောမြင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အပြုအမူဝန်ခံရန်။
တတိယက "သင်၏အသက်တာနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ရန်စတင်သည်မတိုင်မီ porn အတူကဆယ်စုနှစ်ဖြစ်ကောင်းတစ်ခုစွဲတည်ဆောက်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာသောအခက်အခဲရှိတယ်" ဟုသူကလိင်စွဲလမ်း-ရာမရောက်မီဗီဒီယိုကိုကြိုက်သည်အခြား 10 နှစ်ပေါင်းယူအံ့သောငှါစာရငျးယူသူကို Greenfield ကပြောပါတယ် ဂိမ်းစွဲလမ်းအလားတူအောက်မှာ-စူးစမ်း-နေကြသည်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုကြသည် DSM။ သငျသညျကိုကင်းသုံးပါနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းမပါလျှင် "သင်တစ်ဦးစွဲရှိသနည်း ငါညစ်ညမ်း၏တူညီသောပြောချင်ပါတယ်။ သငျသညျနေ့စဉျနေ့ porn ကိုသုံးပါကသင်၏အလုပ်မထိခိုက်ပါဘူးဆိုရင်, သင့်မိသားစု, သင့်ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်သင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအချို့ကြင်နာပေးသင်ပြီးတော့အာဏာအားလုံးကို။ ဒါကြောင့်ပြီးသားတစ်ဦး deleterious သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရဲ့သောအခါငါသာကလူကိုမြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။ "
ထိုအခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိုကဲ့သို့သောစွဲနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုကိစ္စရှိသေး၏။ သောက်စရာသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးထုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းတဦးတည်းအရာဖြစ်၏ တစ်ဦးအပြည့်အဝလည်ပတ်ဘဝကိုဖြစ်စေမပါဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကလိင်နှင့်အတူဘယ်လိုကွာပြုကြသနည်း" Greenfield ကမေးတယ်။ "ခင်ဗျားဘယ်လိုသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိဆက်လက်ရှိနေရန်တစ်စုံတစ်ဦးကသင်ပေးသလဲ?"
ရော့ Watt, Innisfree ကုထုံး၏ညွှန်ကြားရေးမှူး, လန်ဒန်ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ Harley Street မှာစွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်အထူးပြုတစ်ခုတည်းသောအလေ့အကျင့်, သဘောတူ: ပန်းတိုင် abstinence အားပေးအားမြှောက်ပေမယ့်လိင်ဆီသို့ဦးတည်ကျန်းမာသဘောထားကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ "စွဲလမ်းမှုတစ်ခုစှဲလမျးသူတစ်ချိန်ကအမြဲတစ်စှဲလမျးသူအကြံပြုဒါပေမယ့် sex အကြောင်းသို့မဟုတ်အစားအသောက်အကြောင်းကိုဟုတ်မှန်သောမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယျသို့သော်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရဲ့ညစ်ညမ်းစွဲနေတဲ့လေးနက်ဒေနာဖြစ်ပါတယ်; လူတွေနေတဲ့လမ်းပိုင်းမှာနာရီကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အကျိုးဆက်များအဖြစ်ဤမျှလောက်အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. လျော့နည်းပါတယ်။ ယောက်ျားအများကြီးမျက်နှာပြင်တဦးတည်းထွက်ရမ်းပြီးအကြီးအအချိန်ရှိခြင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ထွက်ရှိပါတယ်; ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ လူမျိုး၏ပဒေသာ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ငါနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာရှိသည်။
"ကျွန်မအကြောင်းပြောနေတာတော့လူဖြစ်ကောင်းသတ်သေ, အပူတပြင်းနေကြတယ်" ဟု Watt ကထပ်ပြောသည်။ "သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အလုပ်မှာ masturbating ရှာပါ။ တကယ်တော့သူတို့ဟာမကြာခဏအထူးသဖြင့်ကျနော်တို့ဒီလက်တွေ့ရင်ခုန်စရာအယူအဆပေးထားသည့်မိတ်ဖက်မကြာခဏသစ္စာဖောက်တစ်ဦးပုံစံအဖြစ်မြင်နေနှင့်အတူသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုမကြာခဏဆိုးရလဒ်များကိုနှင့်အတူမကြာခဏသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်အသုံးပြုပုံဖမ်းမိခဲ့ဘဲလျက်မပါဘဲကုသမှုများအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတင်ပြကြဘူး တစ်ဖက်လုံးကိုကျနော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျေနပ်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ ကျနော်တို့ porn နဲ့ crossover ရှိပါတယ်ရာနှင့်အတူအဘယ်သူ၏ပထမဦးဆုံးအစစ်မှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများဂိမ်းကစားခြင်း၏ Hyper-ပြင်းထန်မှုများယခုတက်လာမယ့်အသစ်ကသားစဉ်မြေးဆက်, အဲဒီမှာဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေလူတခြို့အတှကျသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်အချို့သောမိန်းမတို့အဘို့ကြီးတွေပြဿနာတစ်ခုအဖြစ်ဤဖြစ်လျက်ရှိချွတ်ဖြစ်ကောင်းမနီးမဝေးပါပဲ။ "
အမှန်စင်စစ် Watt porn ၏ compulsive အသုံးပြုမှုကိုမကြာခဏကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ-မဟုတ်သေချာပေါက်အဓိကစိတ်ဒဏ်ရာအတွက်အမြစ်များရှိပြီးစောဒကတက်သည်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစိတ်ဒဏ်ရာတစ်ဦးချင်းစီ၏ပင်သတိထားမိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးပြင်းခဲ့ကြစဉ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအချို့သောလိုအပ်ချက်များကို၏စွန့်ခွာဖုံးလွှမ်းနေတာကို။ ကြှနျုပျတို့သညျဤမညျမြှထုံသလဲ? ချက်ချင်း-The တစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်ကိုအစားအစာဒါမှမဟုတ်အော်ဂဇင်၏အကြိုက်သူတို့အားအရာများအတွက်သို့ရောက်ရှိအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အလိုလိုကျလှနျးခွငျးကတဦးတည်းလုပ်လိုသောအရာကိုဖွင့်သောကွောငျ့တစျဦးရဲ့ဘဝအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုများထင်ယောင်ထင်မှားပေးသည်။
ဒါပေမယ့် dopamine hit ခဏတာဖြစ်ပါတယ်-မတူပဲလေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်ဖြစ်နိုင်သောမြင့်မားနဲ့အတူ Endorphins သို့မဟုတ်နှင့်အတူ communing သဘောသဘာဝ-ကစိတ်ကျေနပ်မှုကိုဘယ်တော့မှပါပဲ။ အသစ်အဆန်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ သည်းခံစိတ်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်။ ဇီဝကမ္မမှီခိုဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူရငျးနှီးနည်းနည်းခဲယဉ်းအလုပ်တူ, နည်းနည်းပျင်းစရာ, နှိုင်းယှဉ်အသုံးပြုပုံကြည့်ဖို့စတင်သည်။ ခံစားနေရသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အမှန်တကယ်ကလူကိုမြင်လျှင်ကိုရပ်တန့်။ porn တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်တွေ့ရသောချမ်းသာစိတ်ခံစားမှုအပျြောအပါးကနေသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးဖြစ်လာသည်။
ထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်တွေကိုအခြေခံကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရန်အစာရှောင်ခြင်းအလုပျမဟုတျကွောငျးထို့နောက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, အခြေခံ compulsive အပြုအမူရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရပ်တန့်စေခြင်းငှါ, Watts ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းတရားများ addressing ကိုနှစ်ပေါင်းယူပေလိမ့်မည်။ "ကျွန်မအဖြေမယ့်လာမယ့် 12 နှစ်ပေါင်းအဘို့မိမိတို့လိင်တံမထိရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူသည်အဘယ်အရာခံစားနေရပြီးသူတစ်ဦးဦးကိုပြောပြရန်ဖြစ်ပါသည်စဉ်းစားကြဘူး" ဟုသူကတင်ပြလိုပါသည်။
“ porn သည်ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဘာသာရေးပြissueနာမဟုတ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ရည်းစားနှင့်ထပ်မံလိင်ဆက်ဆံရန်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ”
ရောဘတ် Weiss အခြေအနေကအကြောင်းပိုမိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ "အများဆုံးသည်ညစ်ညမ်းချချပြီးနှင့်အသက်-အတည်ပြုလှုပ်ရှားမှုများ-join တစ် choir သို့မဟုတ်ဘာပဲမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကျူးလွန်၏မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့" ဟုသူကစာရငျးယူလေ၏။ "ဒါဟာ [ခံစားနေရသူ] ပျော်စရာရှိသည်နှင့်နောက်တဖန်ကလူပျော်မွေ့ရန်စတင်ကြောင်းအရာမျိုးအတွက်ပါပဲ။ ဒါဟာအားလုံးသို့မဟုတ်ဘာမျှသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်ဤလူကိုသူတို့ပြန် porn ကိုသွားချင်ကြပါဘူးရှာပါ။ "
ယခု မှစ. , ပြည့်စုံ abstinence လျှင်မဟုတ်တဦးတည်းရဲ့လိင်တံကိုထိရာမှသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထံမှ: အလားတူပင်ဘုရားကျောင်းရဲ့အများနှင့်ယူဆပါသည်ရဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြေရှင်းချက်ကကြက်သားမွန်းကျပ်မှကြွလာသောအခါအအေးကြက်ဆင်သွားကြဖို့, အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲအား '' 12 အဆင့် 'အကွံဉာဏျကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ဖြစ်ပါသည် ထို့နောက်အနည်းဆုံး porn မှအခြားလူတစ်ဦးနှင့်ဆက်ဆံရေး။ "ငါ့ကိုအဘို့, ညစ်ညမ်းတဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ်ဘာသာရေးပြဿနာဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ porn ကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်းအဘို့အဘူးကစောင့်ကြည့်သူတွေကိုဆန့်ကျင်ဘာမျှမရှိသည်။ ငါရိုးရှင်းစွာညစ်ညမ်းအပ်တဖန်ငါ, ငါ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့ "ယူဆပါသည်ပြောပါတယ်, သူ့ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအချို့သုံးလဖြတ်-သတင်းစာဖို့လိုအပ်အချိန်အဆန်းမဟုတ်ကာလအပြီးတွင်ပြန်လည်စတင်ကွောငျးတှေ့ဖို့စတင်ခဲ့တဲ့သူ ယင်းသို့ခလုတ်ကို-နှင့်အတူအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူကိုးလအကြာ။
"ငါသည်ငါ့အကွံဉာဏျရဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းကိုအခြားလူကိုမေးမြန်းတယ်လိုလျှင်: င့်သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်လိင်ဘဝချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့တစ်တွေဆက်ဆံရေးအတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာချင်လျှင်, အစဉ်အမြဲဝေးညစ်ညမ်းနေနှင့်ပြည်သူများကိုပြည့်စုံရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်သောရှာတွေ့သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားအမှုအရာ ။ လူတိုင်းကိုချွတ် jerking သင်ပေးဘယ်တော့မှမလတံ့သောကွန်နက်ရှင်လိုလား, "ယူဆပါသည်ကပြောပါတယ်။ "ဒါပေမယ့်ဖြတ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ဒါဟာသင် Walmart မှာအလုပ်မလုပ်သည့်အခါ junk အစားအစာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေနဲ့တူရဲ့။ porn, အမည်မသိတတ်နိုင်နှင့်လက်လှမ်းဖြစ်၏။ "
“ အခြားယောက်ျားတွေကဘာလုပ်ရမလဲလို့ငါ့ကိုမေးရင်ငါအကြံပေးတာပါ။ လိင်ကိစ္စကိုတကယ်တမ်းလိုချင်ရင် porn ကိုအမြဲတမ်းမနေပါနဲ့ ။ "
ဘုရားကျောင်းကိုပြောပြပါ။ စင်ကြယ်သောဖြစ်ခြင်းသို့ခြောက်လ, သူ၏ဆကျဆံရေးဟာ strain အောက်မှာအဆုံးသတ်နှင့်အစပိုင်းတွင်ဤသူသည်ယခုအခါတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းခက်ခဲတဲ့အချိန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့်သူကပြန် porn သို့မသွားလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပစ်ခတ်ကြသည်။ "ဒါပေမယ့်ငါ relapsing တက်အဆုံးသတ်လုပ်ခဲ့တယ်, ပြီးတော့တဖန်ငါ porn ပယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်လရှိချင်ပါတယ်, ပြီးတော့နောက်တဖန်-နှင့်ပြန်သွားကြသည်ကိုဤငါဘာသာရပ်ပေါ်တွင်စာအုပ်တစ်အုပ်စာဖြင့်ရေးသားင်ပင်ပြီးနောက်ခဲ့ပါတယ်," (ပိုမိုလွယ်ကူအကြံပြုသူကိုဘုရားကျောင်း, ရယ် သင်တန်း၏, ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စည်းကမ်းရှာဖွေတာကိုသင်အားဖြင့်အသက်ရှင်ချင်သောတန်ဖိုးများအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခြင်း, ကိုယ်အဘို့အချို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို setting, သင်ပြုချင်သည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူပေါ်ရတဲ့အချိန်ဖြုန်း), ပြုမိထက်ကပြောသည်။ "ငါသည်ဆဲတတ်ပြီးရှိသည်။ ဒါဟာငါ့ကိုဖွစျပှားနမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုအဲဒီအကြောင်းလည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ထင်ကြပါဘူး။ ကျေနပ် relapse စေပါတယ်။ ဒါဟာပြန်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရောက်စေဖို့အများကြီး porn အသုံးပြုမှုကိုယူမထားဘူး "ဟုသူကတင်ပြလိုပါသည်။
က ပို. ပို. ပျမ်းမျှအား Joes ကိုရှာဖွေရှိရာအမှတ်ရရှိသွားတဲ့မတိုင်မီဘာမှသူတို့ကိုယ်သူတို့အမှတ်တမဲ့ကို select လုပ်ပါ-a-စိတ်ကူးယဉ်ဆိုက်ဘာ Self-မတ်ေတာ၏မှောင်မိုက်ရေဝဲသို့စို့ခံရအမြစ်မှာဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန်ပြုနိုင်ပါသလား? သင်တန်း၏, ထိုကဲ့သို့သော filter များဖြစ်နိုင်ဖွယ်လျင်မြန်စွာကျော်လွှားမည်ဖြစ်ကြောင်းကျယ်ပြန့်လက်ခံမှုလည်းရှိပါတယ်သော်လည်း porn ကြည့်ရှုခြင်းမှနှစ်အောက်-အသက်အသုံးပြုသူများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ filter ကိုအချို့ကြင်နာတွေနဲ့ fixed လာခံရဖို့စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်။ ထိုခဲစှာအရွယ်ရောက်-ups ကူညီပေးသည်။ ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးကျနော်တို့အလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုခံယူသည့် neuro-အေးစက်နားလည်နိုင်အောင်ကြောင်းတဘက်, ယူဆပါသည်စောဒကတက်သည်, ငါတို့ရောနှော schoolkids နှင့်လူကြီးများအတွက်အများကြီးပိုကောင်းလိင်ပညာရေးလိုအပ်ပါတယ်။
"ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း [Psychiatry] [ကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှာပါ] ပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သေးသွားကြဖို့ရှည်လျားသောလမ်းရရှိပါသည်," ဘုရားကျောင်းကပြောပါတယ်။ "။ ကျနော်တို့သေးပြဿနာများ၏အမြင့်ဆုံးကိုမြင်ရပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး" ဒါပေမဲ့တဦးတည်းအရာရှင်းပါတယ်, Weiss စာရငျးယူ: "လူ '' Porn စွဲ ဆို. ရပ်တန့်ဖို့အတွက်အချိန်ရဲ့ရှိရာယခုကြှနျုပျတို့အမှတ်မှာမုချပါပဲ? ကြောင်းအရာဖြစ်၏? ''
By ယောရှု Sims ဇွန် 7, 2019